Inkulumbuso yase-Georgia ixhasa ukuqala kwakhona kweenqwelomoya phakathi kwe-Georgia ne-Russia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inkulumbuso yase-Georgia ixhasa ukuqala kwakhona kweenqwelomoya phakathi kwe-Georgia ne-Russia
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Inkulumbuso Georgia, UGiorgi Gakharia, wamkele ukuphuculwa okunokwenzeka kubudlelwane kunye RhashiyaOko kukuthi, ukuqala kwakhona kweenqwelomoya ngokuthe ngqo phakathi kwala mazwe mabini, urhulumente weendaba waseGeorgia uxelele inkonzo ngoLwesibini.
"Ndiyazamkela iinguqu ezintle ezinokukhokelela kuphuculo, oko kukuthi, ukuqala kwakhona kweenqwelomoya," utshilo uGakharia.
Ngokutsho kweNkulumbuso yaseGeorgia, ukubuyela kwakhona eRussia ngokuthe ngqo akunakunceda "kungekuphela kukhenketho, kodwa namawaka abantu baseGeorgia abajamelene neengxaki zothutho." UGakharia ugxininise ukuba uqoqosho lweli lizwe kufuneka lukhawuleziselwe imicimbi enjalo kwixa elizayo kwaye lukwazi ukulawula umngcipheko onokubakho.
Kwiveki ephelileyo, Umphathiswa Wezangaphandle waseRussia uSergey Lavrov uthe ukuqala kwakhona kweenqwelo moya phakathi kweRussia neGeorgia kuya kuba sisigqibo esifanelekileyo.
Nge-20 kaJuni ka-2019, amawakawaka abaqhankqalazi aqokelelene kufutshane nepalamente yesizwe ekumbindi wedolophu yaseTbilisi, befuna kurhoxa umphathiswa wezangaphakathi kunye nosomlomo wepalamente. Uqhanqalazo lubangelwe sisidubedube malunga nokuthatha inxaxheba kwabathunywa baseRussia kwiseshoni yama-26 yeNdibano ePalamente ye-Orthodoxy (IAO). Nge-20 kaJuni, uMongameli we-IAO uSergei Gavrilov wavula iseshoni kwipalamente yaseGeorgia. Amagqwetha aphikisayo acaphuka ngenxa yokuba uGavrilov ethethe nabathathi-nxaxheba kumsitho wesithethi sepalamente. Ngokuqhankqalaza, abayivumanga iseshoni ye-IAO ukuba iqhubeke. Kungekudala emva kwesiphithiphithi eTbilisi, uMongameli wase-Georgia uSalome Zurabishvili wabiza iRussia njengotshaba kunye nomhlali kwiphepha lakhe likaFacebook, kodwa kamva wathi akukho nto isongela abakhenkethi baseRussia kweli lizwe.
Umongameli wase-Russia uVladimir Putin watyikitya umthetho, owawunyanzelisa ukuvalwa okwethutyana kweenqwelo-moya eziya eGeorgia ukusukela nge-8 kaJulayi. I-22 kaJuni, iSebe lezoThutho laseRussia labhengeza ukuba ukuqala ngoJulayi 8, iinqwelomoya ezenziwa ziinqwelomoya zaseGeorgia zisiya eRashiya.